FBS ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရိုဘော့များနှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ!
စူပါ ထရိတ်ဒါရိုဘော့ ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီ၊ရလာဒ်ကို ကြေငြာပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ။.
ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ အံ့မခန်းဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်; ရာပေါင်းများစွာသော ထရိတ်ဒါတွေဟာ FBSရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းစားပစ္စည်းတွေရဖို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီဆိုတာနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို အုပ်စု ၂ ခုခွဲလိုက်ပါတယ်:
• အဖွဲ့ ၁ - ဒေါ်လာ ၁၀၀မှ - ၉၉၉ဒေါ်လာအထိ ထည့်သွင်းသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ
• အုပ်စု ၂- ဒေါ်လာ ၁၀၀၀မှ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀အထိ ထည့်သွင်းသည့်ပြိုင်ပွဲဝင်များ
ပထမဆု - Dany Pramana နှင့် သူ့ရဲ့ ရိုဘော့ Cyberius (SAMSUNG GALAXY S8+ + [LOTS * $10])
ဒုတိယဆု - Andika Prastika, Magic Apollo (SAMSUNG GALAXY S8 + [LOTS * $10])
တတိယဆု - Hendra Situmorang နှင့် သူ့ရိုဘော့ Brute forcerEA (SAMSUNG GEAR S3 FRONTIER + [LOTS * $10])
ပထမဆု - Mohammad Hadi နှင့်သူ့ရဲ့ရိုဘော့ Forex Mustang (SAMSUNG GALAXY BOOK 4G + [LOTS * $10])
ဒုတိယဆု - Mr. Subianto နှင့် သူ့ရဲ့ရိုဘော့ Racer PRO (SAMSUNG GALAXY TAB S3 + [LOTS * $10])
တတိယဆု - Mr. Firdaus နှင့် သူ့ရဲ့ရိုဘော့ Clutch EA (SAMSUNG GEAR S3 CLASSIC + [LOTS * $10])
ဆုရရှိခဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်! သူတို့ရဲ့ Ea တွေဟာ အခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ပြသခဲ့ကြပါတယ်။.
FBS နှင့်အတူ ဆက်လက်ရောင်းဝယ်လိုက်ပါ၊ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ပြိုင်ပွဲများမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး တန်ဖိုးကြီးဆုတွေရယူလိုက်ပါ!